Umthandazo kueleguá ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Namhlanje siza kukufundisa ukuba ubuze njani kumnini weendlela neendawo zokufikela kuzo umthandazo kueleguá ukukunceda kule nto uyidinga kakhulu, yiyo loo nto simema ukuba uqhubeke nokufunda eli nqaku.
1 Ndifanele ukuwenza nini umthandazo ku-Eleguá?
2 Isibingelelo ukuhlonipha uEleguá
3 Imithandazo kuEleguá
3.1 Umthandazo ngokubanzi ku-Eleguá:
3.2 Ndithandazela imali ku-Eleguá
3.3 Umthandazo ku-Eleguá wokucela uBabalo
3.4 Umthandazo ku-Eleguá wokuvula iindlela
Ndifanele ukuwenza nini umthandazo ku-Eleguá?
U-Eleguá okanye u-Eleggua, nguThixo wenkolo yaseYoruba. Kule nkolo kuthiwa ungumnini weendlela kunye nesiphelo, nguye othatha isigqibo ngekamva lomntu emhlabeni, ukwangulo ophethe uvuyo nentlekele.
Uthathwa njengenkosana ukusukela ukuba ihlelo lakhe libonisa, «Umthunywa oyiNkosana». Kwakhona kuthiwa ungumntu onomdla kwaye unokulawula abanye oothixo baseYoruba. Ke ihlala ifunwa kwaye kuninzi okuceliweyo kuye kule nkolo.
KubuKatolika, kuthiwa i-Eleguá imelwe ngu-El Santo Niño de Atocha. Siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu Umthandazo kuMntwana oyiNgcwele ka-Atocha.
Isibingelelo ngokuhlonipha oothixo baseYoruba
Isibingelelo ukuhlonipha uEleguá
Izibingelelo zenzelwe ukuba kubekho indawo yokucamngca kunye nomthandazo. Okanye kwimeko yamaYoruba ukuhlonipha ingcwele yabo, kule meko siza kuthetha ngesibingelelo esikhethekileyo sika-Eleguá.
Njengoko u-Eleguá ethathwa ngokuba "ngumthumeli oyinkosana" kwisibingelelo sakhe, kufuneka abekhona:
Iimetras, iintsimbi kunye nezinto zokudlala zabantwana.
Imifanekiso eqingqiweyo ka-Eleguá njengomntwana okanye njengomntu omdala.
Umthandazo kwikhadi likaEleguá.
Amakhandlela abomvu namnyama.
Imifanekiso eqingqiweyo yentloko ka-Eleguá.
Amalaphu esibingelelo abomvu namnyama.
Kuwe, xa ufuna ukwenza umnikelo ku-Eleguá, unganikezela:
Ukuze imithandazo ku-Eleguá ibe nefuthe, sicebisa ukuba wenze isibingelelo kunye noku kungentla, okanye ungakwenza ngamakhandlela amathathu: Omnye umhlophe, luhlaza okwesibhakabhaka kunye nohlaza olunye, ubusi kunye nomfanekiso okanye umfanekiso ommeleyo.
Umthandazo ngokubanzi ku-Eleguá:
Owu, Orisha Eleguá omkhulu, wena onokwenza yonke into.
Ndinyanzelekile ukuba ndibhenele namhlanje phambi kwakho ukuze ukwazi ukusombulula oko kundiphoxa.
Ndithi (igama elipheleleyo) ndikucele ukuba (ucacise isicelo).
Ndiyazi ukuba ubawo u-Eleguá akangekhe andiyeke ndikhukhuleke.
Ngokulandelayo, esibingelelweni kufuneka ushiye amakhandlela ekhanyisiwe imizuzu eli-15 ngexesha lomthandazo. Emva kwexesha ungazicima. Kuya kufuneka uyiphinde le nkqubo kwezi ntsuku zimbalwa de amakhandlela aphele.
Ndithandazela imali ku-Eleguá
Owu! Oyena Thixo uphakamileyo uhlala ezulwini, ngo-Elegguá, ndibongoza amandla akho aphakamileyo ukuba acele ukuvulwa kweendlela kuyo yonke imicimbi yezemali evela ebomini bam.
Ndidinga isandla sakho sobungangamsha, Eleguá, ukuze ukhanyise iindlela zam, kwaye ungafumani kuzo naziphi na vibes ezimbi okanye ifuthe elibi elinokwenzakalisa indlela yam eya empumelelweni.
U-Eleguá uceliwe ukuba agxothe iingcinga ezimbi, izenzo, ubuxoki, imigibe, emiselwe umntu owenza umthandazo. Ukwabongozwa ukuba kuvulwe iindlela ezingcono ezigcwele imali, intabalala kunye nozinzo kwezezimali; Isigwebo siqhubeka:
Umntu wam (igama elipheleleyo), ukubuza ke ngobuqhophololo obukhulu ngoncedo lwakho ukuze ufumane imali engakumbi. Ukuze ndikwazi ukunceda inani lam kunye nelezihlobo zam, kuba ubomi bunzima kwaye ubutyebi bunqabile. Ndiyazi ukuba awuyi kundishiya, oh Osha Elegguá. Bayibenjalo.
Ngendlela efanayo, ukuba ufuna ukuba esi sivakalisi sisebenze, kuya kufuneka unike u-Eleguá malunga neziqwenga ezisixhenxe zekhokhonathi, emva koko isiqwenga ngasinye kufuneka senziwe ngobusi, xa zonke zihlanjwa ngento enamathelayo uyazikhupha kwaye ubeke ipepile encinci yiyo.
Okulandelayo, ngeengqekembe ezisixhenxe uza kubeka iziqwenga zecoconut engxoweni emhlophe uze uzibophe ngentambo yegolide. Wayibeka ke ngasemnyango wendlu yakho. Ngokulandelayo, kufuneka uthandaze kangangeentsuku ezisixhenxe kwaye ukhanyise ikhandlela ezimhlophe ezisixhenxe yonke imihla.
Umthandazo ku-Eleguá wokucela uBabalo
Owu thixo mkhulu ka-Eleguá, ndingasoloko ndifumana impumelelo emsebenzini wam obekekileyo endiwenzayo.
Kwaye ukhokele onke amanyathelo ngaphakathi kwilizwe lomsebenzi. Andisoze ndoyiswe nguEleguá, ukuba undinika amandla kunye namandla akho angenasiphelo.
Ukuze uwele yonke iminyango evela.
Emva koku, yaziswa ukuba uya e-Eleguá ngentliziyo yakhe esesandleni nasemadolweni, ukuze acele uncedo olunye okanye ngaphezulu. Kufuneka iqatshelwe into yokuba ezi zinto kufuneka zicaciswe gca; Ubuninzi buceliwe kuwo onke amanqanaba ebomini bomntu.
Impilo-ntle yengqondo kunye nobutyebi beplanethi iya kuhlala ikho ngokude nje undikhathalele.
Mandingaziva ndinganqabisekanga kwikhosi yam, ukuba ubuchule bam bubalasele njenge ilanga ehamba nathi yonke imihla, enkosi kumthombo wakho wokukhanya owugcinayo.
Ngalo mthandazo uza kube unxibelelana no-Eleguá, ke yena uya kuzimamela izicelo zakho kwaye akuncede ngento oyifunayo, gcinani engqondweni ukuba kufuneka zibe zizicelo ezinokwenzeka ngokuthembekileyo nangokuzimisela okuhle.
Umthandazo ku-Eleguá wokuvula iindlela
Elegguá, namhlanje ndiphambi kwakho ukukhupha ubukho bakho obungakholelekiyo ukuze fumana impumelelo kwaye ndikwazi ukuxolisa bonke ubunzima obusendleleni yam okanye kwindlela yam.
Emva koko uyaliphinda igama likaThixo kwaye uqhubeke ngo «Ndicela ukuba ususe kum inani (khankanya inani elipheleleyo legama) zonke iimpembelelo ezimbi,
iziqalekiso okanye ukungcangcazela kakubi okuphoswe ngumntu. Uyaqhubeka nokubonisa umnqweno wakho wokubiza uthixo kunye namandla akhe kunye neentsikelelo, into kuphela anokwazi ukubonelela ngayo.
Umthandazo uyaqhubeka nokubongoza "ngobungangamsha obugqwesileyo" ukuphambukisa iindlela ezinobungozi kwaye ukukhanya okukhulu kukuxelele ekuhambeni kwakhe, ngokucacileyo kuvela e-Eleguá. Iyacelwa ukuba isikeleleke yinyikima yendalo iphela, ngokobuqu nakuko konke esikumeleyo xa kukonke. Gqibezela isivakalisi ngo:
Eleggua, ndicela ukuba izalamane zam nabantu endibathandayo
iindlela zakho zikhululeke kuyo yonke into enesoyikiso sokunyaniseka kwakho.